CC Esca: kanto ny seho natolotry ry Erick Manana, Feo gasy, Dama, Benny sy Bebey | NewsMada
Hetsika lehibe, nanamarika iny faran’ny herinandro iny, ny notanterahina tetsy amin’ny CC Esca Antanimena, ny asabotsy sy alahady tolakandro teo. Voaporofo fa manana ny toerany eo amin’ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny tarika Feo gasy sy ny gadona gasigasy.
Taona maro ny tsy nahitana an-tsehatra izany tarika Feo gasy izany. Mpiaraka matetika, saingy tsy tazana firy tao anatin’ny taona vitsivitsy koa i Erick Manana sy i Dama. Toy izany koa i Erick Manana sy ry Benny sy Bebey. Iraisan’ireo mpanakanto rehetra ireo ny filalaovana gitara sy ny gadona gasigasy mifangaro fironana hafa, toy ny “blues”.
Tsy vitsy ny nankafy ny mozikan’izy ireo ary niandry fatratra ny fiverenan’izy ireo an-tsehatra indray. Seho roa be izao àry ny natolotra tamin’iny faran’ny herinandro iny. Seho samy nanome fahafaham-po ny mpijery, na tsy afaka nandray anjara tamin’ireo aza i Fafah, anisan’ny mpikambana ao amin’ny Feo gasy.
Tsotra kanefa mifanaraka tsara amin’ny toe-panahy tony sy feno fitiavana, entin’ny mozikan’ireo mpanakanto ireo, ny sehatra niakaran-dry Erick Manana. Nibahan-toerana ny feon-gitara akostika, narahin’ny korintsana sy ny amponga moramora. Nampivaivay ny fientanam-po, tamin’ireo hira somary mihetsiketsika, kosa ny jiro maroloko.
Feno tanteraka ny fampisehoana, hany ka nalain-kisaraka ny roa tonta: i Erick Manana, i Dama, ry Benny sy Bebey ary ny tarika Feo gasy, andaniny, ny mpijery kosa, ankilany. Na samy efa ampolon-taona maromaro aza ireo tarika ireo, mbola tsy afaka am-bavan’ny maro ny hirany ary niaraha-niredona ny ankamaroan’ireo nentina an-tsehatra, nandritra ireo andro roa ireo.
Nizara efatra ny fampisehoana tsirairay ka nanokatra ny sehatra i Erick Manana, izay hita ho niaina tanteraka ny kanto natosany ho an’ny mpijery. Nisongadina tamin’ny fampiaraham-peony tamin’i Dama kosa ny feo samy miavaka kanefa mifameno ananan’izy ireo, nampian’ny fahaiza-mitendry gitara, izay mbola mampitolagaga ny maro.
Tsy latsa-danja amin’izany ny fiakaran-dry Benny sy Bebey an-tsehatra, izay efa mpiaraka matetika tamin’i Erick Manana, mahay mampitovy tadin-dokanga tsara. Toy ny nitondra tsiahy maro kosa ny fiverenan’ny tarika Feo gasy an-tsehatra, nampiverina indray teo am-bavan’ny mpijery ireo hira mbola mampalaza azy ireo, toy ny “Voahangy”, “Any indray andro…”, sns.